Shiinaha Linear Heat Ogaanshaha Cable NMS1001 warshad iyo alaableyda | Anbesec
Danab Hawleed: DC 24V
Rakaabka La Ogol Yahay: 16VDC-28VDC
Heerka taagan: ≤ 20mA
Digniinta Hadda: ≤ 30mA
Qoyaanka ugu badan ee qaraabada ah ee muddada dheer la isticmaalo: 90% -98%
Qiimeynta IP: IP66
Heerkulka alaarmiga: 68 ℃, 88 ℃, 105 ℃, 138 ℃ iyo 180 ℃
1. Naqshadeynta amniga warshadaha
2. Isdhexgalka korantada oo leh naqshad adeegsiga awoodda yar
3. La socodka waqtiga dhabta ah
4. La shaqeynta DC24V ama aan lahayn DC24V
5. Waqtiga jawaab celinta degdegga ah
6. Looma baahna magdhow heerkulka alaarmiga
7. La jaan qaadi kara nooc kasta oo nidaamyada digniinta dabka
Xarkaha kuleylka ee lagu ogaanayo kuleylka toosan ayaa ah qeybta ugu muhiimsan ee nidaamka ogaanshaha kuleylka toosan waana qeybta xasaasiga ah ee ogaanshaha heerkulka. NMS1001 Digital Linear Heat Detector wuxuu siiyaa xilli hore soo ogaanshaha howlaha digniinta ee deegaanka la ilaaliyo, Baaraha waxaa loo aqoonsan karaa inuu yahay baare nooca dhijitaalka ah. Polymer-ka inta udhaxeysa labada tooriye ee wax dhisa waxay ku burburi doonaan heerkul go'an oo cayiman oo u oggolaanaysa qaboojiyeyaasha inay la xiriiraan, wareegga tallaalka ayaa bilaabi doona digniinta. Baaruhu wuxuu leeyahay dareen joogto ah. Dareenka dareeraha kuleylka toosan laguma saameyn doono isbeddelka heerkulka deegaanka iyo dhererka fiilada baaritaanka la isticmaalayo. Uma baahna sixid iyo magdhaw. Baaruhu wuxuu u wareejin karaa labadaba qalabka digniinta iyo ciladaha si uu u koontaroolo qaanadaha sida caadiga ah leh DC24V la'aan.
Isku-dhafka laba kaari oo adag oo macdan ah oo ay daboolaan NTC wax kuleylka xasaasiga ah, oo leh faashad dahaadhsan iyo jaakad dibedda ah, halkan waxaa imanaya Nooca Dijital ah ee Xariiqa Heer Ogaanshaha. Iyo tirooyinka noocyada kala duwan waxay kuxiranyihiin noocyada kala duwan ee qalabka jaakadda dibedda si ay ula kulanto deegaanno gaar ah oo kala duwan.
Qiimeynta Heerkulka Baaraha (Heerarka Heerkulka Digniinta)
Qiimeynno badan oo heer-kul-baare ah oo hoos ku taxan ayaa loo heli karaa deegaanno kala duwan:
Sida loo doorto heerkulka heerkulka, oo la mid ah xulashada astaamaha astaamaha barta, adigoo tixgelinaya arrimaha hoose:
(1) Waa maxay heerkulka ugu sarreeya ee deegaanka, halkaasoo qalabka lagu baaro lagu isticmaalo?
Caadi ahaan, heerkulka ugu sarreeya ee deegaanku waa inuu ka yaraadaa xuduudaha hoos ku taxan.
Heerkulka deegaanka (Max)
Kaliya ma qaadan karno heerkulka hawada tixgelinta, laakiin sidoo kale heerkulka qalabka la ilaaliyo. Haddii kale, baaruhu wuxuu bilaabi doonaa digniin been ah.
(2) Doorashada nooca saxda ah ee LHD sida ku xusan jawiga arjiga
Tusaale: Markaan isticmaalno LHD si aan u ilaalino fiilada korontada. Heerkulka ugu sarreeya ee hawadu waa 40 ° C, laakiin heerkulka xarigga korontada kama yaraan 40 ° C, haddii aan dooranno LHD oo ah 68 ° C heerka heerkulka alaarmiga, digniinta beenta ah dhici doonta.
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waxaa jira noocyo badan oo LHD ah, Nooca Caadiga ah, Nooca Dibedda, waxqabadka sare ee Nooca Cadaadiska Kiimikada iyo Nooca Cadeynta Qarax, nooc kasta wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah iyo codsiyo. Fadlan dooro nooca saxda ah iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah.
Unugga Xakamaynta iyo EOL
(Qaybta Xakamaynta iyo qeexida EOL waxaa lagu arki karaa hordhaca alaabada)
Macaamiisha ayaa dooran kara aaladaha kale ee korontada si ay ugu xirmaan NMS1001. Si aad u diyaar garaw fiican samayso waa inaad ixtiraamtaa tilmaamaha soo socda:
(1) Anxoojinta awoodda ilaalinta qalabka (terminal input).
Inta lagu jiro hawlgalka, LHD waxay isku duubi kartaa calaamadda aaladda la ilaaliyo (fiilada korantada), taas oo sababi karta kororka korantada ama saamaynta hadda ku timaadda barta wax lagu xidho ee qalabka isku xidha.
(2) Falanqaynta awoodda anti-EMI ee qalabka (boosteejada galka).
Sababtoo ah isticmaalka dhererka dheer ee LHD inta lagu jiro hawlgalka, waxaa jiri kara soo noqnoqoshada awoodda ama inta jeer ee raadiyaha ka yimaada LHD lafteeda faragelinta faragelinta.
(3) Falanqaynta waa maxay dhererka ugu badan ee LHD qalabku wuu isku xidhi karaa.
Falanqeyntan waa inay ku xirnaataa xuduudaha farsamo ee NMS1001, oo si faahfaahsan loogu soo bandhigi doono buuggan dambe.
Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Injineeradayadu waxay bixin doonaan taageero farsamo.
1. Astaamaha alaabta
Qalabkani waa fududahay in la rakibo. Waxaa lagu hagaajiyay magnet xoog leh, iyada oo aan loo baahnayn feer ama qaab dhismeedka alxanka markii la rakibayo.
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa rakibidda iyo hagaajinta qalabka dabka ogaada nooca xariiqa dhismayaasha qalabka birta ah sida qalabka wax lagu beddelo, taangiga saliidda waaweyn, buundada xargaha iwm.
3. Heerkulka heerkulka shaqada: -10 ℃ - + 50 ℃
Xarkaha fiilada waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo fiilada kuleylka ee lagu ogaado fiilada korantada marka LHD loo isticmaalo in lagu ilaaliyo fiilada korantada.
2. Baaxadda loo adeegsaday
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa rakibidda iyo hagaajinta qalabka dabka ogaada nooca xariiqa tunnel-ka, fiilada, fiilada
3. Heerkulka shaqada
Xarka xadhiggu wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo naylo ah, oo loo isticmaali karo ka yar 40 ℃ - + 85 ℃
Terminalka Isku Xidhka Dhexe
Terminalka isku xira dhexdhexaadka waxaa badanaa loo isticmaalaa sida fiilooyinka dhexe ee fiilada LHD iyo fiilada calaamadaha. Waxaa la adeegsadaa marka xarigga LHD uu u baahan yahay xiriir dhexdhexaad ah dherer dartiis. Terminalka isku xiraya dhexdhexaadka waa 2P.
Marka hore, nuugo qalabka magnetka si isdaba joog ah shayga la ilaaliyo, ka dibna iska fur (ama dabci) labada bool ee ku yaal daboolka kore ee qalabka, eeg Sawirka 1aad. Markaas hal dhignooca dabka ogaada in lagu hagaajiyo laguna rakibo (ama la maro) jeexitaanka qalabka birlabta. Ugu dambayntiina dib u dhig jaldiga kore ee ciyaarta iskana sii dheji. Tirada qalabka birlabta waxay ku xiran tahay xaaladda goobta.
Tunnelka fiilada, usheeda dhexe Cable, sandwich-ka Kableh, Kabaha saxaarada
Nidaamka gudbinta suunka gawaarida
Maamulaha, qolka isgaarsiinta, qolka baakadka batteriga
Taangiga wareega, taangiga saqafka sabayn, taangiga kaydinta taagan, Saxaarad Cable, Booyad shidaalJasiiradda xeebta lagu caajiso
Warshad maraakiibta iyo maraakiibta
Maraakiibta birta ah
Warshad kiimiko ah
Weelka falcelinta, Haanta Storge
Kanaalka Rakaabka, Hangar, Bakhaarka, Carousel bagaashka
Metro, Khadadka tareenka magaalooyinka, Tunnel
Xuduudaha waxqabadka ee ogaanshaha heerkulka
Ilaa 45 ℃
Ilaa 70 ℃
Ilaa 105 ℃
Ilaa 60 ℃
Ilaa 75 ℃
Ilaa 93 ℃
Ilaa 121 ℃
Meelaha la Aqbali Karo
Waqtiga jawaab celinta
Halbeegyada korantada & waxqabadka jirka la xiriira
Waxyaabaha kaari ku xidha
Ballaca kaarika xudunta u ah
Tabeele (laba-koorsooyin, 25 ℃)
Awood qaybinta (25 ℃)
Cilad-qaybin (25 ℃)
Iska caabin ah ningax diirkja
Dahaarka u dhexeeya diirkja iyo jaakad dibadda ah
Hore: NMS1001-L Qaybta Xakamaynta
Xiga: Nidaamka daminta dabka ceeryaanta ee cadaadiska sare leh （2.1）